ပြည်ပအတွေ့အကြုံ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -toeictw.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ပြည်ပအတွေ့အကြုံ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 7-3
ကျွန်မကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းကငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နထေိုငျအတှကျင့်တလျက်ပြီ.ကျွန်မတက္ကသိုလ်မှာ dual-ဒီဂရီသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ,ငါကြိုးစားရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပါသည်.အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပမှာလေ့လာနေဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်အလို့ငှာ,ငါလည်စည်းကိုလိုက်နာ’s ကိုဆရာ, ဆရာမ’စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုလေ့ကျင့်ဖို့ညွှန်ကြားချက်;နားထောင်ခြင်းသည်,ငါသည်ငါ့နားထောင်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်သည့်အားလပ်ချိန်များတွင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှု;ထို့ပြင်,ကျွန်မမှန်မှန်စကားပြောအင်္ဂလိပ်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ငံခြားသားများနှင့်အတူဘာသာစကားလဲလှယ်ပါဝင်ခဲ့.အဆိုပါဘွဲ့ရယူပြီးနောက်'အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ s ကိုဒီဂရီ,ငါသည်ငါ့သခင်ကိုဆက်လက်ပေးဖို့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှလျှောက်ထား's ကိုဒီဂရီ!